सपा OCHO भुक्तानी गर्न के कर मा? व्यक्तिगत उद्यमीहरू लागि सामान्य कराधान सिस्टम: वक्तव्य
सपा OCHO भुक्तानी गर्न के कर मा? यो प्रश्न आफैलाई व्यापार मा प्रयास गर्न चाहने धेरै मानिसहरूलाई चासो छ। आखिर, रूस मा कर प्रणाली भिन्न छन्। प्रत्येक यसको फाइदा र बेफाइदा छ। साथै, कर घोषणामा अनिवार्य छ चाहिन्छ। आफ्नो आवृत्ति, साथै रिपोर्ट को संख्या पनि रोजेका प्रणाली निर्भर। के कर मा भुक्तानी गर्न आईपी OCHO देखि? र अक्सर कसरी? यो सबै।
तर पहिलो, हामी यस प्रणाली चयन गर्न चाहे पत्ता? यो केवल यति धेरै कारोबार बस सरलीकृत कर प्रणालीमा जाने प्रयास गर्दै छ! तिनीहरूले कुनै पनि कर्मचारीहरु र कुनै पनि विशेष लागत छैन, विशेष गरी यदि गर्छन्।
यो कुरा हो समग्र कर प्रणाली सम्भव शुल्क मात्र PIs तिर्नुपर्छ भन्ने पूर्ण सूची समावेश छ। त्यसैले, यो कि नै एकदम जटिल OCHO छ मान गर्न तार्किक छ। र यो धेरै repels। तर, यो भेद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदाहरणका लागि बिक्री मा लगे जो छन् र निर्माण व्यवसाय, मुख्य रूप उद्यमीहरू देखेको छ।
कि तपाईं आईपी OCHO खोल्न गर्दा स्वचालित रूपमा सक्रिय ध्यान दिनुहोस्। त्यो तपाईं गतिविधि एक विशेष कर शासन निर्दिष्ट गर्नुभएन को सुरुमा एक बयान मा हुनुहुन्छ भने, सामान्य प्रणाली अन्तर्गत काम गर्नेछ छ। यो राम्रो र खराब दुवै छ। यो विकल्प तपाईं को लागि सही छ भन्ने निर्णय गरेका छौं भने, तपाईं भुक्तानी गर्न के कर OCHO मा आईपी विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बुझ्न त गाह्रो छैन।
यसरी, अवश्य छ जो पहिलो भुक्तानी - यो सम्पत्ति कर हो। उहाँले सबै भुक्तानी , व्यक्तिगत उद्यमीहरू कर प्रणाली बिना। यहाँ परिवहन र भूमि कर समावेश हुन सक्छ। त्यसैले तयार - तपाईंको अवस्थित स्वामित्व सम्पत्ति मा कर सेवा संग खाता फाइल गर्न आवश्यक हुनेछ। हामी व्यक्तिगत उद्यमीहरू आफूलाई ऋण को उपस्थिति मा सम्पत्ति पूरा खातामा लिन भने यो महत्त्वपूर्ण छ।
कति म यस प्रकारको को OCHO बयान गर्न सपा लागू गर्नुपर्छ? एक त्रैमासिक आधारमा। केही हुनत कुनै पनि घोषणाहरूमा आवश्यक छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। यो त छैन। र हामी कुरा गर्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति मा कर। तपाईं रिपोर्टिङ अवधि अन्तिम महिनाको 30 द्वारा एक त्रैमासिक आधारमा घोषणामा पेश गर्न आवश्यक हुनेछ।
तर, एक caveat छ। यो देशमा वा परिवहन कर आउँदा, एक वर्ष एक पटक रिपोर्ट गर्न हुनेछ। र गर्दा पेनाल्टी फेब्रुअरी 1 अघि भुक्तानी हुनुपर्छ। यो अवस्थामा केही कठिन छैन। याद गर्न मुख्य कुरा एक चौथाई पटक (महिनाको अन्त गर्न) सपा सशुल्क 1.02 भूमि र परिवहन कर गर्न रिपोर्ट को सम्पत्ति छ भन्ने छ।
तपाईं कर्मचारीहरु छन् भने
के अर्को छ? अक्सर, सपा कुनै पनि कर्मचारीहरु छ। र, तपाईं पनि राज्य रिपोर्ट गर्न को लागि, यो अंदाजा। तर, पनि छैन अक्सर। प्रायजसो, घोषणाहरूमा वार्षिक छन्। र यो सबै कागजी कार्रवाई संग सम्झौता आवश्यक एक पटक मात्र एक वर्ष छ।
रिपोर्ट मजदुर (पिट-2) कर अवधि को अन्त द्वारा दायर हुनुपर्छ। त्यो रिपोर्ट निम्न प्रत्येक वर्ष को अप्रिल 30 सम्म छ। छ, 2013 मा, तपाईं 2012 को लागि 2014 मा रिपोर्ट - 2013 र यति मा लागि। त्यहाँ बारेमा कठिन केही छ। केही हुनत व्यक्तिगत उद्यमीहरू यो कर र सारा रूपमा रिपोर्ट छूट दिइएका छन्।
ठ्याक्कै सन्दर्भ गर्दा 2-पिट तपाईं आवश्यक छैन? त्यसपछि, तपाईँले आफ्नै काम गरिरहेका छौं। कर्मचारीहरु बिना OCHO मा सपा - एक एकदम साधारण घटना, तर यस्तो अवस्थामा यो USN जान राम्रो छ। तपाईं एक साधारण प्रणाली मा थिए भने, पेश गर्न तयार एक शून्य फिर्ती 2-पिट। यो त गाह्रो छैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट 3-पिट सपा OCHO मा (र केवल समग्र प्रणालीमा) छ। यो रिपोर्ट शायद सबै व्यक्तिहरूलाई र संगठन साथै उद्यमीहरू पेश गर्न छ। यो एक वर्ष एक पटक गरिन्छ।
यो कर अवधि पूरा हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सजिलो छ। थप ठीक, प्रत्येक वर्ष को अप्रिल 30, तपाईं एक पूरा घोषणा पेस गर्नुहुन्छ, तर कर आफूलाई तिर्न PIs पछि गर्न सक्छन् पर्छ। के बिन्दु सम्म? प्रत्येक वर्ष को जुलाई 15 मा पूर्व। तैपनि, धेरै पहिले नै पूर्ण ऋण संग खाता बसोबास 30,04 प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यस संस्करणमा एक तल भुक्तानी भनिन्छ। रिपोर्ट र ऋण बारेमा भूल - सिद्धान्त, यो धेरै सुविधाजनक छ।
RPF र FSS
OCHO मा सपा को बाहेक भुक्तानी कुनै पनि कर पहिले नै सूचीकृत? उदाहरणका लागि, कुनै पनि संगठन, साथै आधिकारिक कार्यरत छ जसले नागरिक जस्तै, तपाईं पेन्सन कोष र सामाजिक बीमा कोष गर्न स्थिर योगदान भुक्तानी गर्न छ। यो अनिवार्य भुक्तानी, बच जो छैन। सामान्यतया जो कोहीले।
यस मामला मा, कर तिर्न सपा (वा बरु, उपयुक्त रिपोर्ट बनाउँछ र भुक्तानी) एक त्रैमासिक आधारमा। धेरै आफ्नो आय निर्भर किनभने - रकमसँग गणना गर्न गाह्रो छ। हुनत त्यहाँ भुक्तानी निश्चित छन्। तिनीहरूले हरेक वर्ष परिवर्तन बढ्छ। यो प्रत्येक चौथाई को 25 यस्तै रिपोर्ट लागू गर्न मनमोहक छ।
खर्च र राजस्व लागि लेखा
कराधान को एक साधारण प्रणाली चयन गर्न निर्णय गरेको छ जसले व्यक्तिगत उद्यमी देखि अरू के आवश्यक छ? माथिको शुल्क सबै मा त्यहाँ अन्त छैन। शून्य आईपी OCHO मा रिपोर्ट, हामीले देख्यौं पनि ठाउँ लिन्छ। तर उनको बाहेक एक वर्ष कर कार्यालयमा लागत र राजस्व को लेखा को एक विशेष पुस्तक पेश गर्न हुनेछ एक पटक। यो, एउटा नियम को रूप मा, USN, संग मालिक एक्लै काम गर्दछ र कुनै खर्च छ जब छ। लाभ मात्र।
जब यो एक रिपोर्ट लागि पुस्तक पेश गर्न आवश्यक छ? यो धेरै वार्षिक भुक्तानी कर अवधि को अन्त द्वारा घोषित हुनुपर्छ भनेर अनुमान गर्न सजिलो छ। भनेर टेप इच्छा बोझ तपाईं द्वारा प्रत्येक वर्ष को अप्रिल 30। सिद्धान्त, यो धेरै सुविधाजनक छ। आखिर, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, रिपोर्ट को धेरै तयार र यो बिन्दु हो प्रासंगिक अधिकारीहरूले पेश गर्नुपर्छ। यो शाब्दिक एक समयमा सबै समस्याहरू खाता बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। केही कठिन, सही?
सायद कराधान को साधारण प्रणालीमा रहन कारण एक - खरिद र लाभ उद्यमी मा VAT को उपस्थिति छ। तपाईं यो अवधि सामना भने, यो व्यर्थमा चुनिएको थिएन OCHO तपाईं हो। यो कुरा उद्यमीहरू पनि भ्याट कर छ भन्ने छ। उहाँले, सबै अरूलाई जस्तै।
साँचो, यो मामला मा बयान तपाईं एकदम प्रयास गर्नेछ। किन? भ्याट कर सामान्यतया एक पटक एक चौथाई, घोषणा गरिएको छ। वर्तमान कानून अनुसार, हाकिमहरूले अन्तिम महिनाको 25 द्वारा एक पूर्ण रिपोर्ट तयार गर्न आवश्यक छ। यो कहिलेकाहीं समय र प्रयास को धेरै गुमाउन गराउँछ। त्यसैले तयार। यसलाई भ्याट मा रिपोर्ट, तपाईं4पटक वर्षको लागि कर फाइल गर्न आवश्यक हुनेछ भनेर बाहिर जान्छ। त्यसैले साँच्चै धेरै छैन। को कागजी कार्रवाई र यति उद्यमीहरू पर्याप्त छ कि विचार गर्दा, त्यसपछि पनि एक अतिरिक्त रिपोर्ट असुविधाको धेरै ल्याउन सक्षम छ।
सपा OCHO भुक्तानी गर्न के कर मा? यसलाई सूचीकृत विकल्प बाहेक, तपाईंले आफ्नो पहिलो आय घोषणा गर्न आवश्यक हुनेछ, अनिवार्य छ। यो एक रिपोर्ट 4-पिट आकर्षित गर्न हुनेछ। उहाँले एक पटक सिद्धान्त सेवा गरें। तर 50% एक वर्ष घट्ने वा बढ्छ लाभ छ भने, यो रिपोर्ट आकर्षित गर्न हुनेछ।
के मिति सम्म यो घोषणा गर्न आवश्यक छ? यहाँ तपाईँले हतार गर्न आवश्यक छ। पछि 4-पिट प्रमाणपत्र जसमा तपाईं पहिलो राजस्व प्राप्त एक निम्न महिनाको5औं गरेर कर कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ। सिद्धान्त मा, केही यसको बारेमा विशेष। पहिलो लाभ लागि रिपोर्ट। अभ्यास resubmission 4-पिट मात्र दुर्लभ छ अन्तिम उपायको, रूपमा आवश्यक छैन।
यसलाई लाग्न सक्छ
खैर, सम्भव रेकर्ड र कर संग, हामी बाहिर समझ। तर अर्को हुन कसरी अहिले? रिपोर्ट गर्दा कागजात कस्तो उपयोगी हुन सक्छ? विविध सूची, निर्णय यो अत्यन्तै कठिन छ। तपाईं कुनै पनि अवसरको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ:
आईपी विवरण (पासपोर्ट उद्यमी);
कर्मचारीहरु मा जानकारी (कुनै पनि भने, आफ्नो पासपोर्ट विवरण को);
आय (रसिद, अनुबंध, आदि) को बयान;
कागजातहरू लागत मा (कुनै पनि);
स्वामित्व को प्रमाणपत्र;
शीर्षक (वाहन कर लागि);
सिद्धान्त, यो सामान्यतया पर्याप्त छ। बित्तिकै कागजातको सूची तयार छ रूपमा, एक निर्धारित समय भित्र रिपोर्ट बनाउन। जहाँ सबै क्षेत्रहरू बाहिर, भर्न तपाईं चाँडै प्रक्रिया खाता बसोबास गर्न मद्दत गर्छ कि एक सरल भाषा साइन इन गर्न आवश्यक छ - यो एक कम्प्यूटर संग यो गर्न राम्रो छ। साथै, तपाईंले सबै आवश्यक डाटा प्रविष्ट गर्नुभएको पछि घोषणा स्वतः उत्पन्न हुनेछ। सबै रहन्छ कि - कर कार्यालय यसलाई पेश गर्न छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, OCHO मा सपा कर धेरै दिन्छिन्। र कागजी कार्रवाई त्यहाँ पर्याप्त भन्दा बढि छ। कुल कर प्रणाली किनभने - यो सम्भव भुक्तानी पूर्ण सूची हो। त्यसैले, धेरै सरल कर प्रणाली मा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भने गरिएको छ, यो एक्लै व्यापार गर्छ जो कोहीले लागि सिर्फ एक अद्भुत विकल्प हो। को FSS र RPF योगदान गर्न - को "सरल कर प्रणाली" आम्दानी लागि खाता जब तपाईं एक वर्ष एक पटक र एक चौथाई पटक छ।
कर्पोरेट लाभ कर, कर दर: प्रकार र आकार
कसरी एक घर खरीद को प्रतिशत 13 फर्कन? अपार्टमेन्ट खरीद लागि कर कटौती
माल को बजार विनियमन मा भन्सार कर्तव्य कस्तो भूमिका के?
अप्रत्यक्ष कर - यो के हो?
कर दर वर्गीकरण। कर दर प्रकार
वैकल्पिक ताप: उपलब्ध विकल्पहरू
पानी संग वजन खोने: मिथक वा वास्तविकता?
गुदा fringe हटाउँदै: वर्णन, सिफारिसहरू, पुनर्वास
कसरी troy औंस धेरै ग्राम छ
को "ओडी" पाङ्ग्राहरू कसरी चयन गर्ने?
कथा एक सारांश मलाई, - मानिस जस्तै दुई प्रमुखहरूलाई खुवाउन Saltykov-Shchedrin
Nihilism - सीमा शंका